That's so good, right?: Cold Comfort
အိမ်အပြင်ကိုရောက်တာ တစ်နာရီလောက်ရှိပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီဝက်လောက်ကတော့ ရာသီဥတုအေးတာကြောင့် တစ်ခုခုသောက်ဖို့ သောက်စရာထွက်ဝယ်ချင်ခဲ့တာ။ အိုး....ဘယ်လိုရာသီဥတုပါလိမ့် အရိုးထဲစိမ့်အောင် အေးတာပါလား။ သောကြာနေ့ည အနုတ် ၁၀ ဒီဂရီလောက် ရှိမယ့်အချိန်ပဲ။ ကျွန်တော် အနွေးထည်ခပ်ထူထူဝတ်ခဲ့ရမှာကို အပြင်ထွက် သောက်စရာ ယမကာလေးဝယ်ရုံပဲဆိုပြီး ထ သွားထလာပုံစံဝတ်ခဲ့တာ liquor ဆိုင်တွေကပိတ်ကုန်ပြီဆိုတော့ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ရောက်ဖို့လမ်း အတော်လျောက်ရမယ်လေ။ နည်းနည်း နွေးအောင် တစ်နေရာရာမှာခိုနားဖို့ ကျွန်တော့်အတွက် လိုနေတာအမှန်ဗျ။ စက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးကိုဖြတ်၊ စုပေါင်းအိမ်ရာ ၀င်းကိုဖြတ် လျှောက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်ခပ် သွက်သွက်။ သစ်ပင်အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းကြီးအောက် ပူးပူးကပ်ကပ် ကျွန်တော်ဝင်နားမိသေးတယ် ခဏတော့။
ကျွန်တော့်အိမ်ကို အပြေးလေးပြန်လာပြီး လမ်းသွယ်တစ်ခုကိုအဖြတ် ကျွန်တော့်အိမ်အနောက်ဘက်နားအရောက် ကုန်တင်ကား အသေး စားတစ်စင်းလမ်းအမှောင်ခြမ်းဘက်မှာ ရပ်ထားတယ်။ ဒါ ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ များသောအားဖြင့် ဒီလိုကားတွေဟာ စားသောက်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ဆီတို့ ဓာတ်ငွေ့တို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေနားမှာသာ ရပ်နားတတ်ကြတာလေ။ ကားမောင်းသူက သူ့ကားရဲ့ ဆီပိုက်တွေကို စစ်ဆေး၊ ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို သေချာကြည့်လုပ်နေလေရဲ့။
ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ ခေါင်းတစ်ချက် ဆတ်ပြကာ နှုတ်ဆက်တယ်။ ကြည့် ရတာ ဒီအနီးအနားကလူပဲထင်ပါတယ်လို့ တွေးမိသား။ စဉ်းစားမရဘူး ဘာလဲတော့မသိ။ လမ်းပဲဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ်။ ၀ယ် လာတဲ့ ဘီယာသံဘူး ၆ပါကင်လောက်ထည့်ထားတဲ့ Recycle အိတ်ကိုဆွဲလာရတာ အိမ်နားရောက်ဖို့ နီးလာပေမဲ့ မသယ်နိုင်တော့ သယောင် လက်များက ထုံကျဉ်လာတယ်။
ကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ဝိုက်မှာလည်း အေးစက်စက်အလွှာပါးတစ်ခု ကာထားသလို အေးနေပြီ။ truck ကားနားနီးလာတော့ ကားမောင်းသူက နောက်ခန်းကုန်ပစ္စည်းတွေနှင့်လွတ်ရာမှာ အိပ်ယာခင်းတွေနှင့် ခင်းကျင်းကာ အိပ်စက်ဖို့ ပြင်ဆင် နေဟန်တွေ့ရပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကားသမားဆီက ‘ဟေး...ဘော်ဒါ’ အော်သံတစ်ချက်ထွက်လာရဲ့။ သူ တံခါးလက်ကိုင်ကနေ အောက်ကိုခိုဆင်းရင်းပေါ့။ ‘အရမ်းအေးနေရင် ဒီမှာ ခဏနားပါလားဗျ...နည်းနည်းနွေးပါတယ်’ အိုး...good! အရိုးခိုက်အောင်အေးနေတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် သိပ်မစဉ်းစားဖြစ်ပါဘူး။ ကားနောက်ခန်းတံခါးဆီလျှောက်လှမ်းသွားလိုက်ကာ ခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။ ‘ကျေးဇူး....လမ်းလျှောက်ရင်းအရမ်းအေးနေတာ အတော်ပဲဗျာ’
ကားသမားက ပြုံးကာ ‘ခင်ဗျားကြည့်ရတာ အေးပြီးခဲတော့မယ့်ပုံစံဖြစ်နေတာ’ တဲ့။
သူ့ဆီက နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ နောက်ထပ် စကား တစ်ခွန်းကြားလိုက်ရမှ သူ့သဘောကဘယ်လိုဆိုတာ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းသိရရော။ ‘ဘီယာတစ်ဘူးလောက် သောက်ခွင့်ရရင် အဆင်ပြေမယ် နော်... ဟဲ..ဟဲ’ ကျွန်တော် ဘီယာ ၆ဘူးတစ်တွဲကနေ သံဘူးတစ်ဘူး သူ့ကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ ‘အအေးလှိုင်းက တစ်ညလုံး ဖြတ် မလားမသိ အတော်ပျင်းစရာကောင်းမယ်။ နည်းနည်းနွေးသွားတဲ့အထိ ကားပေါ်မှာ နားပါလား’ ကျွန်တော့်ထက် သူက ခန္ဓာကိုယ်ထွားပါ တယ်။ အရမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သတိမူစရာ သတိထားစရာ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေ။ အချို့အရာတွေအတွက် စိုးရိမ် နေမိခြင်းက နည်းနည်းများရူးရာကျနေသလားလို့။ ကျုပ်က မဟုတ်မဟတ်လုပ်မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော် သူ့မျက်ဝန်းတွေကို သေချာကြည့်မိပါတယ်။ ‘အကောင်းမြင်စမ်းပါဗျာ...’ သူစကားလည်းပြောပြီးရော တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တယ်။ သူ့ပေါင်ကို အသာအယာ ပွတ်သပ်နေခြင်း။ ကားနောက်ခန်းက လေလုံတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကြောင့် ပူအိုက်လာဟန်ပါ။ ‘အိပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ နေရာကို ရွှေ့ရအောင်၊ အဲဒီနားက ခြေဆန့်လက်ဆန့်ပိုရှိတယ်’ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ တီရှပ်နှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီကလွဲလို့ အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီတွေချွတ်၊ ခြေအိတ်ဝတ်ထားတဲ့ ခြေထောက်အစုံနှင့်အတူ အိပ်ယာပေါ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ‘ခင်ဗျား ဒီအနီးအနားမှာနေတာလား?’
သူဘီယာတစ်ဘူးသောက်ပြီးတော့ သက်သောင့်သက်သာရှိသွားပုံပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ သူစိမ်းတစ်ယောက်အတွက် ဘယ် နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာပြောဖို့ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ပါဘူး။
ကားသမားက ခပ်ကြောင်ကြောင် အသံနှင့် တစ်ချက်ရယ်တယ်။ ‘တစ်ယောက်ယောက် ဖင်ကိုလိုက်ပြီးကြည့်နေဖို့အပြင်မှာ အေးလွန်းပါ တယ်ဗျာ’ ဖင်? ဒီလူဘာအဓိပ္ပာယ်နှင့် ထည့်ပြောရတာလဲမသိပါဘူး။ ‘အင်း...ထိုင်နေတာကမှ ဖင်နွေးပါသေးတယ်ဗျာ’ ‘ဟုတ်တယ်’ ပြန်အငေါ်တူးလိုက်တော့ ‘ခင်ဗျားအ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပြီး အေးဆေးနေစမ်းပါဗျာ’ တဲ့။ ဒီအသံကြားရတာ တစ်မျိုးပဲ သူကgay လား? ဒီကားမောင်းသမားဟာလေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကော gay ဖြစ်နေခဲ့သလား? No, ဒါပေမဲ့ ကားသမား သူ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနေရာ ရွှေ့ တုန်း ဘောင်းဘီကြားကမြင်လိုက်ရတဲ့ ဖင်အကွဲကြောင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်မိသေးတယ်။ အာ...ကျွန်တော် ဘဲတစ်ပွေရဲ့ တင်ပါးတွေကို ဂရုထား တွေးမိခဲ့ဖူးလား? ဟုတ်တယ် တွေးကြည့်ဖူးတယ်ဗျ။
‘ကျုပ်နောက်ထပ် ဘီယာတစ်ဘူးလောက် ထပ်ယူဦးမယ်ဗျာ’ ကားသမားက ဘီယာနောက်တစ်ဘူးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ ဘီယာဘူးတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်တွေကြားမှာ ထားထားတာဆိုတော့ ကားသမားဘီယာဘူးယူတာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကို ပွတ်သတ်သွားခဲ့တယ်လေ။
ဟေး! ကျွန်တော်အလန့်တကြား အော်လိုက်မိရော။ ‘ပေါင်ခြံနားက ဘီယူဘူးက နွေးနေတယ်’ တဲ့ပြောသေးတယ်သူက။ပြီးတော့မှ ကားသမားက မျက်လုံးပြူးသွားကာ ‘ကျုပ် အခြောက်မဟုတ်ဘူးနော်’ လို့ ဘာတွေပေါက်သွားသလဲမသိ အလန့်တကြား ထရွတ်တယ်။
‘ကျွန်တော်လည်း မဟုတ်ဘူးလေ’ ကျွန်တော်အပေါ်က ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းကုတ်ပါးပါးလေးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ အောက်ခံ တီရှပ်က ပါးပါးလေးပေါ့နော်။ ဒီလောက်အခြေအနေလေးကပဲ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်အလှကို တစ်ဖက်သားမှန်းလို့ရတဲ့ အနေအထားပါပဲ။ ‘ခင်ဗျား ထည့်ထည့်ပြောနေတဲ့ စကားလုံးကိုရပ်လိုက်တော့ဗျာ၊ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ကားပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဘာလဲဗျ’ ကျွန်တော် ဘီယာတန်ခိုးနှင့် ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်ရပါတယ် သူ့ကို။ ဟုတ်တယ်လေ ဘာစကားတွေပြော ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိ။
‘ကျုပ် ဧည့်ဝတ်ကျေရုံလေးပါ စကားလုံးတွေနဲ့’ ကျွန်တော် ကားသမားနား တိုးကပ်သွားလိုက်တယ်။ ‘ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ပေါင်တွေကို ပွတ်သပ်တာ၊ ခြေထောက်တွေကို မထိတထိ တို့တာ၊ အဲဒါ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေတယ်လို့ ခေါ်တာလားဗျ’
‘ကျွတ်...ခင်ဗျား ဘီယာခင်ဗျားသောက်ပြီး ဂိုးတော့ဒါဆို’
သူနှင်ထုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ထွက်သွားဖို့မစဉ်းစားမိတဲ့အခြေအနေပါ။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့အိပ်ယာပေါ်သူထိုင်နေတဲ့ ကားမောင်းသမားရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ‘ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အခုမှ သက် သောင့်သက်သာ အနားယူမလို့လေဗျာ’ သူနဲ့မတူတဲ့ ကျွန်တော်ပဲ လေ။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တစ်ယောက်မှ ဖိအားပေးလို့မရစဘူး။ ကားသမားက ကျွန်တော့်ထက်ထွားတယ်။ တင်ပါးကလည်း အကြီး ကြီးပဲ။ ကျွန်တော် တင်ပါးဆုံကြီးတာကိုကြိုက်တယ်။ ဒီကားသမားက တစ်ကိုယ်လုံးအသားတွေနှင့်ပြည့်နေတာ။ မ၀ဘူးဗျ။ ခန္ဓာကိုယ် ထွားတော့ အချို့ငနဲတွေအတွက် စွဲဆောင်မှုရှိနေမှာအမှန်ပဲ။ No, ကျွန်တော် gay မဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်။ သူ့ပုံစံကိုအားကျနေရုံ သက်သက် ပဲထင်တယ်။
‘ခင်ဗျားဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်ပါလား’ ကျွန်တော် သူ့ကို ခပ်တိုးတိုး အသံမထွက်ဘဲ ပြောလိုက်တယ်။ သူကလည်း ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ ခါးပတ်ကို စဖြုတ်ပါရဲ့။ မကြာခင်မှာ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီဟာ ကားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အ၀တ်ပုံတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ ‘ခင်ဗျား အတွင်းခံ ရောချွတ်လိုက်ဗျာ ကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့’
ကျွန်တော်ကားသမားရဲ့ ပေါင်ခြံအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို စေ့ငုမိပါတယ်။ အရမ်းမာတောင်လာတဲ့ ငပဲကြီးကိုရောပေါ့။ အဲဒါကြီးက ထိပ် အရေပြားဖြတ်မထားဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းထက်ကြီးတယ်။ သူ့ငပဲကို သူ့လက်အစုံနှင့် ပွတ်သပ်ရင်း လက်သီး ဆုပ်ထဲသွင်းလိုက်တယ်။ ထိပ်ပေါက်ဝလေးကနေ အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်လာသလိုပဲဗျ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုတောင် မယုံနိုင် တော့ဘူး ကျွန်တော် လုပ်ဆောင်မိနေခြင်းတွေအပေါ်။ တခြားအမျိုးသား တစ်ယောက်အား ညစ်ညမ်းတဲ့ အရာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ တွန်းအားပေးဖြစ်နေခြင်းကိုရော။ ‘gay မဟုတ်ဘူး? ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား -ီးက မာတောင်နေပါလား’
ကျွန်တော်သူ့ကို ရယ်သံစွက်တဲ့ လေသံနှင့် ပြောမိပါတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း မာတောင်လာပါ၏။ မျိုးတူ ငနဲတစ်ပွေရဲ့-ီးကို ဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကိုင်တွယ်မိလိုက်ပါပြီ။ ‘ခင်ဗျား လက်ထဲက ဘီယာကို နည်းနည်းတိုက်ဗျာ’ အသံခပ်တိုးတိုးနှင့် ဆို လိုက်တော့ ကားသမားက သူ့လက်ထဲက ဘီယာသံဗူးကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဝမှာ တေ့ကာ လောင်းထည့်ပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်တွေ ဟာ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေရော။ ကျွန်တော် ဦးခေါင်းကို ခပ်မော့မော့လေးထားပေးတော့ ကားသမားက ဘီယာကို အဆင်ပြေအောင် လောင်းထည့်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ရှိလာသမျှ ဘီယာတွေကိုမျိုချပစ်ပါတယ်။
နည်းနည်းလေးတော့ ပါးစပ်ထဲ ချန်ထားမိပါတယ်။ မျက်စိတစ်ချက်ခတ်ချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် ကားသမားရဲ့ ငပဲ၊တုတ်ခိုင်ပြီး ခုံးထနေတဲ့ ပစ္စည်းဆီ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဖိကပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟကာ ငပဲထိပ်ကနေ အဆုံးထိစမျိုလိုက်တာ အောက် ခြေထိရောက်ကရော။ ပါးစပ်ထဲကနည်းနည်းကျန်တဲ့ ဘီယာဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကနေ ကားသမားရဲ့ပေါင်ခြံဆီ စီးဆင်းသွားပါတယ်။ နှာခေါင်းအစုံနှင့် ထိနေတဲ့ ကားသမားရဲ့ဆီးစပ်မှ ချွေးနံ့မဟုတ်တဲ့ အနံ့တစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကိုနှိုးဆွနေသလိုပဲ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် ငပဲအရင်းကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း ပါးစပ်ထဲကနေ ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲက တံတွေးနဲ့အတူ ရောနှောနေတဲ့ ငံကျိကျိတွေကို မျိုချပစ်ပါတယ်။
‘အိပ်ယာပေါ်လှည့်ပြီး လေးဘက်ထောက်လိုက်ဗျာ’ ကားသမားကို ကျွန်တော်ထပ်မံအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် တင်ပါးအစုံရဲ့အ လယ်က ခရေပွင့်ကို မြင်ရပါပြီ။ ဟုတ်တယ် ခရေပွင့်အစစ်။ စကားထဲ သူထည့်ထည့်ပြောနေတဲ့ဟာ။ အဲဒါက ကျွန်တော်စိတ်ကူးထား သလိုပဲ ပန်းသွေးရောင်ထနေရော။ ပြည့်ပြီးတင်းနေတဲ့ တင်သားဆိုင်အကြားက အမြှောင်းလေးဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့်အပ်ဖို့ သန့်ရှင်းပါတယ်။ ‘ရှေ့ပိုင်းကိုအောက်ဆိုက်ပြီး တင်ပါးတွေကို ပိုမြှောက် လိုက်ဗျာ’ ထပ်ထပ်ပြီး ကျွန်တော်အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော်ပြောသလို တင်ပါးတွေပိုမြောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာ တင်တွေကြွတက်လာပြီး ခရေဟာ ပွင့်အာလုဆဲ ဆဲဖြစ်ရော။
အလုပ်ဖြစ်သား။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ချွတ်ပြလိုက်တာ သူစိမ်းဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အာဏာ သူ့အပေါ်လွှမ်းနိုင်ပါတယ်။
‘ခင်ဗျား ဖင်က စကားသံတွေထွက်လာအောင် လုပ်မလို့ပါ’
မို့မောက်နေတဲ့ အသားဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ရင်း တင်ပါးအကွဲကြောင်းရှိရာဆီ ကျွန်တော်မျက်နှာအပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ တင်ပါးအစုံကို အဦးဆုံး စတင်စားသောက်ခြင်းပါပဲ။ တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက်မှာ အမွှေးနုလေးတွေက အသည်းယားစဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်လျှာကို ထုတ်ပြီး ခရေ၀လေးကို တို့ထိ တို့ထိ ကစားပါတယ်။ လျှာလေးနှင့် ကလိထိုးရင်း အတွင်းထဲ ထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားတော့ သူ့ခရေကြွက်သားတွေဟာ ပိုမိုတင်းကြပ်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းဖျားက ညည်းညူသံအချို့ထွက်လာ ပါ တော့တယ်။ ကျွန်တော် သူ့တင်ပါးအစုံကို ကိုင်ဖြဲကာ ခရေ၀ကိုလျှာနှင့်ဖိထိုးပြီး ကစားတာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ။ ဒီတော့လည်း သူအလျော့ ပေးဖွင့်ဟပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် လျှာကိုမာအောင်ထားပြီး ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် သူ့ခရေ၀ကို လျှာနှင့် -ိုးနေရင်း တင်ပါးတွေကိုခပ်သာသာ ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စိတ်တွေ လက်လွှတ်သွား အောင်ပေါ့။ တကယ်လည်း ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် သူ့စိတ်တွေထကြွမှုကို မထိန်းချုပ်တော့ပါ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အိပ်ယာနှင့် ပိုမိုဖိကပ် တင်ပါးတွေကို သဘောရှိအလှူပေးပါတယ်။ နှုတ်ဖျားကလည်း ညည်းညူသံက ကျယ်လောင်လာတာ အတော်။ ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲက အပူရှိန်ကို ခရေ၀ထဲတွန်းထည့်ထားတဲ့ လျှာဖျားကနေ ခံစားရသလိုပဲ။ ‘အာ..အ..Please’ အသက် ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ ကားသမားက တောင်းဆိုတာ ဘာကိုလဲမသိ။
‘No, ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ စိတ်မကူးဘူးဗျ’ ကျွန်တော် သူ့ကိုပြန်ပြောမိပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ဟာ သူ့တင်ပါးအိအိကြီးတွေနှင့် ပြည့်နေ ခဲ့သည်ပဲ။
ကျွန်တော် သူ့တင်ပါးအစုံကို စားသုံးနေတာ မျက်နှာအဆီဲပြန်ချွေးစေးထွက်လာမှ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကို ပြန်မတ် လိုက်ပေမဲ့ ခရေ၀ဟနေအောင် တင်ပါးအစုံကိုဖြဲထားတဲ့ကျွန်တော့်လက်အစုံကိုတော့ မရုတ်သိမ်းမိသေးပါ။ ကျွန်တော်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အသာတွန်းရွှေ့ရင်း ပက်လက်လှန်စေလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခါးနောက်မှာ ခေါင်းအုံးတွေ ခုလိုက်တော့ သူ့ခရေ၀ဟာ ကျွန်တော့် တံတွေး တွေအစွမ်းနဲ့ မီးရောင် မလင်းတလင်းမှာ တောက်ပနေပါရဲ့။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်ကို တက်လှမ်း၊ မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အသင့်စောင့်နေတဲ့ ခရေ၀ထဲကို နှင့်အတူ ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းဖိသွင်းလိုက်တာ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်နဲ့ သူ့တင်ပါးအိအိ တွေနဲ့ ကပ်သွားတဲ့အထိပါ။ ပြည့်ပြီးတင်းကြပ်နေတဲ့ အသားဆိုင်ထဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အားပြုပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို ထိုးသွင်းနေရသလို ခံစားရပါတယ်။ တင်သားတွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲခပ်မာမာကို ဖျစ်ညှစ်ပြီးဆွဲထားသလိုလဲဖြစ်ရဲ့။ သူ့အသက်ရှူသံဟာ မြန်ဆန်လာသလို အော်သံတစ်ချို့လည်း ထွက်လာပါတယ် နှုတ်ခမ်းအစုံက။ ကျွန်တော့်ငပဲကိုပြန်ဆွဲနှုတ်၊ ထိပ်ပိုင်းလေးပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း၊ နောက်ဆုံး ကြပ်တည်းလှတဲ့ ခရေ၀ထဲ ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။
‘ခင်ဗျားပြောတော့...သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်နေဆို’ ကား သမားကို စကားဆိုလိုက်တော့ သူ့စကားပြန်မရ။ ‘ခင်ဗျား ဖင်ကို အေးဆေးထားပြီး ငြိမ်နေတာက ဖီလင်ပိုကောင်းပါတယ်’
ကျွန်တော် ယောက်ျားခြင်း ဖင်-ိုးရတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါ။ ကြပ်သိပ်နေတဲ့ခရေကြွက်သားတွေက မိန်းမတွေကို လုပ်ရတာနဲ့မတူတဲ့ ဖီလင်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ မလုပ်ဘဲ မရပ်တန့်ချင်တော့သလို ခပ်ဖြည်းဖြည်းလည်းမလုပ်ချင်တော့ပါ။ မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ တခြားသောအရာတွေကို မစဉ်းစားမိအောင် လျစ်လျူလျှုစေပါတယ်။ ငပဲထိပ်ဝကို တဖြည်းဖြည်းအဆုံးထိ ခရေ၀ထဲ ထိုးသွင်းတာမှာ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကိုအရင် ပြီးမှတစ်ချောင်းလုံးပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမျိုးသားပိုင်ပစ္စည်းဟာ ဖောင်းအိတင်းကြပ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့တင်ပါး တွေကြားမှာ မြှုပ်နှံထားသလိုပဲဗျာ။
ကျွန်တော် ခပ်မှန်မှန် လေး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေရင်းက ခဏရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ခရေထဲကို ကျွန်တော့်ငပဲကို သွင်းထားစဉ် ခံစားရသော ပူနွေးမှုက မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းသား..။ ပူနွေးနေတဲ့ ရေနွေးပုလင်းတွေ ငပဲ တစ်ဝိုက်ဝန်းရံထားသလိုပါပဲ။ စိုစွတ်သော ပူနွေးသော ရေနွေးပုလင်း။
ကျွန်တော်အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အစကနေ တရစ်ခြင်းပြန်သွင်းကာ လှုပ်ရှားမှုကို ပြန်စတင်လိုက်ပါတယ်။
တင်ပါးဖြိုးအိအိတွေ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်အထိကပ်လာတာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါရဲ့။
လှုပ်ရှားမှုအစဉ်အတိုင်း လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ အသားဆိုင်များဟာ ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲ ရေငတ်လာသလို ခံစားရစေပါတယ်။ ကားသမားတင်ပါးတွေနဲ့ ကျွန်တော့် ဆီးစပ်ရိုက်ခတ်သံဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လောင်လာတယ် တဖြည်းဖြည်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။ ဒီလူရဲ့ ဖင်ကို သောက်ရမ်းကြိုက်သွားပြီ။ နည်းနည်းနာတယ် ပြောလာတာကြောင့် ခဏနေကလို သူလေးဘက်ထောက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့လည်း သူ့ပခုံးသားတွေကို ကျွန်တော့် လက်နှစ်ဖက် နှင့်ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း အထုတ်အသွင်းဆက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ဖက်နည်းနည်းဆုတ်ကာ သူ့ဖင်ထဲဝင်ထွက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကြည့်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ တောင်ကြားလမ်းထဲက ခရေ၀ထဲပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်။ ကျွန်တော် အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် ငပဲကိုပေါ့။ ကျွန်တော့်ငပဲအထုတ်အသွင်းကြောင့် ဟစိဟစိဖြစ်နေတဲ့ သူ့ခရေ၀ဟာ ဟူး...စော်တွေရဲ့ အပေါက်နှင့် တူသလား?
ကားသမားရဲ့ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံထွက်နေပါတယ်။ နာကျင်တဲ့ မိန့်မူးသာယာသံဖြစ်မယ်။ ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက ပေးတဲ့ နာကျင်မှုဖြင့် သာသာယာယာပါပဲ။ ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ငပဲကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းအဆုံးထိသွင်းလိုက်စဉ် ခံစားရတဲ့ ဖီလင်ဟာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိ နည်းနည်းလေးချောင်သွားပေမဲ့ တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားနေဆဲ။ ကားသမားကို doggy style ချနေခြင်း အတွက် နေရာအကွက်အကွင်း သိပ်ကျယ်နေစရာမလိုဘူး။ ဒီကားသမားရဲ့ဖင်ကို စလိုးကတည်းက ဒီစတိုင်လ်နဲ့ ချချင်နေခဲ့တာ။
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကားသမားခန္ဓာကိုယ်နှင့် ရိုက်ခတ်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အားအင်တွေ စုစည်းပြီး လှုပ်ရှားနေခြင်းပါပဲလေ။
‘Yeah! ခင်ဗျား ဖင်ထဲအပြည့်ဖြည့်မှာ...ကြပ်သိပ်နေတဲ့ ခင်ဗျား ဖင်ထဲ အပြည့်ဖြည့်မှာ...အ..အ’ ကျွန်တော် အသက်ရှူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းနှင့် အားပါပါ သူ့ကို ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကားသမားရဲ့ နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံပိုမိုထွက်လာသလို သူ့ခရေကြွက်သားဟာလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကို ပိုမိုဖျစ်ညှစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီငနဲနှင့် လိင်ဆက်ဆံရတာ အတော်ကောင်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းမှုကိုသာ အားမကိုးတော့ဘဲ သူ့ရဲ့နောက်ပြန် ဖိသွင်းမှုကိုလည်းပြန်အားကိုးရတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုကို သိပ်မပြင်းတော့ပဲ အသာအလိုက်သင့်မျောလိုက်တယ်။ သူ့ခရေ၀ဟာ ကျွန်တော့်ငပဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ခြင်းအတွက် အဆီးအတားမရှိ ဟပေးလိုက်ပါပြီ။ အဆုံးထိသွင်းပြီးဆောင့်လိုက်၊ ထိပ်ပိုင်းလေးပဲသွင်းပြီး လှုပ်ရှားလိုက်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ဆောင့်သွင်းချက်တိုင်း သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားက စိတ်လှုပ်ရှားတက် ကြွသံဟာ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ‘အိုး...အ’ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်နှင့် သူ့တင်ပါးတွေ ထိခတ်သံဟာလည်း စိတ်တက်ကြွမှုကို ပိုမိုအားပေးပါ တယ်လေ။ အသံတွေကြားရတော့ ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းချက်တွေဟာ ပိုပိုပြီးမြန်ဆန်လာရပါတယ်။ ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်း လုပ်မှု ကြောင့်မြည်သံတွေဟာ ခပ်တည်းတည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်အာရုံလွှဲပြောင်းထားမှုကို ပြန်နှုတ်စေလာပြီ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော် အဆုံး ထိသွင်းထားမှုကို ပြန်နှုတ်လိုက်ကာ ခဏငြိမ်၊ ပြီးတော့ ခရေ၀ထဲပြန်သွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ကားသမားရဲ့ ခရေ၀ထဲ သုတ်ရည်တွေ တစ်လျော့ပြီး တစ်လျော့ပေါ့။
ကျွန်တော် ပြန်ဆွဲနှုတ်ဖို့ဟန်ပြင်တော့ သူက ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို နောက်ပြန်လှန်းဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း ခဏငြိမ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော် အသာခပ်ဖြည်းဖြည်း နောက်ပြန်ထိုင်ချတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကို မကျွတ်စေဘဲ အလိုက်သင့်ထိုင်ချပါတယ်။ နှစ်ဦးသား ကိုယ်ခန္ဓာ ဟာ ချွေးတွေရွှဲနေကြရော။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်မှာပါ။ အသက်ရှူသံတွေဟာ ငြိမ်သက်နေမိသော နှစ်ဦးသားမှာ ခဏကြာမှပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ကားသမားရဲ့ ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိတာ စိတ်ထဲမှာ ရင်ခုန်သလို ခံစားရသား။ ဘာကြောင့်ဆို ဒီလူ့ဗိုက်သားက အဆီမရှိ ကြွက်သားအဖုဖုတွေနဲ့လေ။
‘ခင်ဗျား ဖင်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းကြွပြီး ကျွန်တော့်-ီးကို ထုတ်လိုက်တော့ဗျာ’
‘အာ...အ..ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်ပါကွ’ ကျွန်တော်က သူ့ဖင်အကြွမှာ ငပဲကို နှုတ်ဖို့ကြိုးစားတာကော။ အပြင်ကို တထစ်ပြီး တထစ် ထွက် လာတော့ သူ့ခရေ၀ထဲက ချောဆီတွေရွှဲကနဲကျလာတယ်။ condom က အရည်အသွေးကောင်းသားပဲ သူဘယ်ကနေ အသင့်ဝယ် ထားလည်းမသိ မပြဲမပေါက်ဘူးဗျ။ တစ်ရှူးစ တစ်ခုနှင့် ကိုင်ကာ ဆွဲချွတ်ပြီး မလှမ်းမကမ်းမှာ ထားလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခရေ၀ကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထွေးဖက်ထားရင်းမှ လက်ချောင်းတွေကိုသုံးကာ ပွတ်သပ်နှိုက်ပြုမိပါတယ်။ ကျွန်တော့် နံဘေး အလိုက်သင့်လှဲလျောင်းနေတဲ့ သူ့အသက်ရှူသံဟာ မြန်လာပြီး သူ့ငပဲထိပ်ကနေ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပါရော။ ‘ကျွန်တော် ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို မလိုးဖူးဘူး..တကယ်’ အသက်ရှူသံလောက် လေသံနှင့်သူ့ကို ပြောမိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်သည်လည်း ကားသမားရဲ့ ဘေးမှာ တကယ်အေးငြိမ်းသာယာစွာ လှဲလျောင်းမိပါတယ်။ ဒီလူဟာ ကျွန်တော် ဟိုးအရင်တုန်းက သိမြင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ယောက်လား သိချင်စမ်းပါဘိ။ နှစ်ဦးသား အိပ်မောကျသွားကြပါတယ် အချိန် ခဏအကြာမှာတော့။ မနက်ခင်း ရောက်တော့ ကားသမားက ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဘာမှမပြော မမေးဘဲမောင်းသွားပါတယ်။ မနေ့ညဆိုတာထက် သူ ကျွန်တော့်ကိုသိ နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ သူ ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်....(ကျွန်တော် စဉ်းစားမိခြင်းပါ)။
Alex Aung (17 October 2011)
Posted by Alex Aung at 4:20 PM
နောင်တမရခဲ့ပါ (အပိုင်း နှစ်)
ကျွန်တော် ချစ်သော "သူ"
Peyronie's Disease ကျား-လိင်အင်္ဂါ ကောက်နေခြင်း